DEPIOTE A. AURELINE : Hanampy amin’ny fananganana ny Tranobe ho an’ny vehivavy sahirana
Hatsangana ao amin’ny foibem-paritry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy Alaotra Mangoro ny Tranobe ho an’ny vehivavy tra-pahasahiranana. 27 juin 2014
Ny Solombavambahoaka Andriamasimanana Auréline no hiantoka ny fananganana azy io araka ny nambarany tamin’ny mpanao gazety ny 25 jona lasa teo, raha nanontaniana momba ny fandaharan’asany mahakasika ny fiahiana ireo vehivavy manana olana, ny tenany. « Efa hetahetan’ireo fikambanam-behivavy hatramin’izay ny hanana trano manokana hahafahan’izy ireo midinika sy mifanakalo hevitra mahakasika ny famahana olana amin’ireo vehivavy tra-pahasiranana ka izay no antony nahatapa-kevitra anay hanampy amin’ny fananganana izany », hoy izy.
Nisaorany manokana ny foibem-paritry ny mponina Alaotra Mangoro nanao ezaka lehibe nanampy ny vehivavy hatrany hatramin’izay teo amin’ny fiarovana azy manoloana ny herisetra izay namely mafy tao ho ao. Hafaliana no nandraisan’ny fikambanam-behivavin’ Alaotra Mangoro izao fanohanana ataon’ny Solombavambahoaka, Andriamasimanana Auréline, ny fananganana ny trano ahafahan’izy ireo mifanakalo hevitra izao. Tsy ho ela dia hanomboka ny asa rehetra mahakasika izany satria efa misy ny tany hananganana izany.